Notafihin’ny andian-jiolahy miisa dimy nitondra fitaovam-piadiana, afakomaly ny ben’ny Tanànan’i Londona, kaominina ambanivohitr’i Soavinandriana. Voalaza fa niditra an-keriny tao amin’ilay niharam-boina izy sady nanapoaka tsipoapoaka ka niparitaka ny olona. Lasan’izy ireo ny lelavola mitentina 2 tapitrisa Ar sy tablette iray. Nandositra nizotra any amin’ny faritr’i Faratsiho ireo jiolahy. Tsy nisy ny olona naratra. Mitohy ny fikarohana ataon’ny zandary ireto jiolahy ireto.
Tovolahy iray no hita faty tao amin’ny fokontanin’Amboditsaina Toamasina II, afakomaly. Voalaza fa maty an-drano ity lehilahy ity, saingy tsy fantatra kosa izay antony nahafaty azy. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritra ao Toamasina niaraka tamin’ny tompon’andraikitry ny BMH sy ny mpamonjy voina. Napetraka ao amin’ny tranom-paty ao amin’ny Hopitalibe Toamasina ny razana. Mitohy ny famotorana ataon’ny zandary.
Maty tsy tra-drano ilay ankizikely nodonin’ny kamiaobe iray tao Anahindrano Antsohihy, ny alatsinainy teo. Voalaza fa ho any Mandritsara ity kamiaobe ity no nahavoadona ilay ankizikely saika niampita tampoka. Nidina teny an-toerana ny zandary taorian’izay niaraka tamin’ny dokotera avy ao amin’ny CSB II nanao ny fizahana. Notazonina tao amin’ny kaompanian’ny zandary ao Antsohihy ilay mpamily sy ny mpanampy azy ho fiarovana ny ainy. Mitohy ny fanadihadiana.